Baarlamanka JFS oo doortay xubno ka dhinnaa guddiga la socodka iyo dib-u-eegista dastuurka dalka – Kalfadhi
Kulankii 10naad ee kalfadhiga shannaad ee golaha shacabka oo ay maanta baarlamanku ku lahaayeen xaruunta golaha ee Muqdisho ayaa goor dhowayd oo galabta ah soo dhamaaday.
Waxaa ku tartamay saggaal mudane labada kursi. Doorasho laba wareeg ah ayaa ka dhacday golaha. Kursi ka mid ah waxaa ku tartamay shan mudane kan kalena afar mudane, sida uu ku waramayo weriyaha Kalfadhi.
Xildhibaan Sayid-cali Cabdulqaadir Macalin iyo xildhibaan Siciid Maxamed Xayd ayaa baarlamanku u doortay kuraastaas ka maqnaa guddiga dib-u-eegista dastuurka.
Weriyaha warbaahinta Kalfadhi ee golaha ayaa ku waramay in buuq ka dhashay hannaanka coddaynta intii lagu jiray wareegii koowaad, taas oo fadhiga qarka u saartay inuu xirmo in kastoo markii dambe la xaliyay muranka.